Naya Post Nepal | प’क्रा’उ परे र्‍यापर ‘लाहुरे’ ग,र्नै नहुने काम गरेछ्न चे’कजाँच गर्दा प्रहरी समेत परे अ’चम्म !
प’क्रा’उ परे र्‍यापर ‘लाहुरे’ ग,र्नै नहुने काम गरेछ्न चे’कजाँच गर्दा प्रहरी समेत परे अ’चम्म !
काठमाडौं – चर्चित र्‍या,पर आशिष राना प,क्राउ परे,का छन् । लाहुरे’ नामले प’रि’चित उनलाई पोखराको न्यु,रोडबाट प,क्राउ गरेको जिल्ला प्र’हरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापाले जा’नकारी दिए।
उनलाई लागुऔ’षध मु”द्दामा प”क्राउ गरेको प्रहरी ले जनाएको छ । उनी हिजो बेलुकी प’क्राउ परेका हुन्। एक जना लाहुरे भन्ने आशिष राना लाई हामीले ला,गु औ,षधको मु,द्दामा ल्याएका छौं,’ प्रहरी उप, रीक्षक थापाले भने,‘
अनुसन्धानको क्र,ममा छ । ’उनी हिमालयन रोडिजका नि,र्णायक पनि हुन् । उनीमाथि थप अ’नुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । र्‍याप ब्या,टल रअ बा’र्जबाट उनी च,र्चामा आएका थिए । उनको केस नम्बर ४०२, नेपहपको बाटो, मेरो सोल्टा, सुपर सागा लगयात गीतहरू च,र्चित छन्।
यो पनि ,,काठमाडौं-२६ मित्रनगरस्थित बसपार्कमा महिलामाथि सा मूहिक ब’ला’त्का’र गरेको आ”रोप लागेका ९ जनालाई प्रहरीले सा’ र्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले मंगलबार राति सात जना र बुधबार दुई जनालाई प”क्राउ गरेको थियो। प”क्राउ परेका आ”रोपीहरूलाई प्रह रीले बुधबार साँझ सा-र्वजनिक गरेको हो।
२३ व,र्षीय शि,वहरि बुढा, २४ वर्षीय युवराज बडुवाल, २५ वर्षीय हस्त नेपाली, छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का २१ वर्षी य सुरेश सेजुवाल, छायानाथ राजा नगरपालिका-११ का २४ वर्षीय चन्द्र साउद र कपिलवस्तु बुद्धभूमिका गोपालकु मार शिरीष रहेका छन्।
परिसर प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीका अनुसार उनी हरू सबै वैदेशिक रोजगारी जाने तयारीमा थिए । सोमबार सुर्खेतबा ट काम खो’ज्दै काठमाडौं आएकी ३४ वर्षीया महिला लाई ब’लात्का र गरेको आ-रोपमा उनीहरू लाई प्रहरीले प”क्राउ गरेको हो।
मैनालीका अनुसार सोमबार साँझदेखि मंगलबार बिहानसम्म ती महिलालाई बसपार्कका विभिन्न गेष्ट हाउसमा लगेर ब”लात्कार गरि एको थियो।
महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गरी घ’ट’नाको अ’नुसन्धान थालिएको छ। प”क्रायउ परेकाहरूलाई ज-बरजस्ती क, रणी मु”द्दामा हि’रासत’मा राखेर अ’नुसन्धान थालिएको मैनालीले ब ताए।
२०७८ पुष १५, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 152 Views